မရွှေကြည် မင်္ဂလာပွဲ…. ရွာသူရွာသားများ သံတောင်(နော်ဘူဘောတောင်) ခရီးစဉ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » မရွှေကြည် မင်္ဂလာပွဲ…. ရွာသူရွာသားများ သံတောင်(နော်ဘူဘောတောင်) ခရီးစဉ်	19
မရွှေကြည် မင်္ဂလာပွဲ…. ရွာသူရွာသားများ သံတောင်(နော်ဘူဘောတောင်) ခရီးစဉ်
Posted by အောင် မိုးသူ on Nov 30, 2015 in My Dear Diary | 19 comments
ဦးကြောင်ကြီး says: မြွေတွတ်…..
အောင် မိုးသူ says: မောင်ကျွတ်
တောင်ပေါ်သား says: ပသီချောင်းမှာ ရိုက်ပေးတဲ့ ပုံလေး
myanmargoal@gmail.com ကို ပို့ပေးပါလား ကိုအောင်မိုးသူရေ
အဲ့ တစ်ပုံထဲ ရိုက်ခဲ့တာ ၊
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်ကဲ့ ပို့ပေးလိုက်မယ် အူးလေး
ဦးကြောင်ကြီး says: အူးမျိုး မုန်းတာလှား.. အူးမျိုးတမီး မုန်းတှာလား… အီးဟီးဟီး… အတလျားဗူး…
တောင်ပေါ်သား says: ဘလော့တာကို ပြန်ဖျက်မလို့
ဒါပေမယ့် ကြောင့်နာမည် ပြန်ရှာမရ ၊ ဒုက္ခ :P
ဦးကြောင်ကြီး says: အူးမျိုး အမှားဂျီး မှားဂဲ့ပီ။ လျှာဇဝံမှာ ကြောင်က္ခထီးနဲ့ကြောင် ခြစ်ခြစ်ခင်ခင်နေဂျောင်း ပမို့ အဲလာ မဖြစ်နိုင်ဒေါ့…။ တနည်းတော့ ရှိလယ်… ဘာလှည်း အူးမျိုး တိပါလယ်… ငှီးလျောင်း ငှီးလျောင်း…
Was this answer helpful?LikeDislike 6346
သံချောင်း says: ဪ
တောင်ပေါ်က သင်္ဘောဦး ဘုရားတို့ ဘာတို့ ပြောပါတယ်
အောင် မိုးသူ says: သင်္ဘောဦးဘုရားလို့ ခေါ်သလား။ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမဟုတ်ဘူးလား။
သံချောင်း says: ဟုတ်ယား
Mike says: .ပျော်စရာကြီးပဲနော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: လူစုံတက်စုံ
သတို့သားနဲ့ သတို့သမီးက ကျက်သရေရှိပါ့တော်။
Alinsett @ Maung Thura says: အဲ့နေ့က
အောင် မိုးသူ says: အဲ့မှာလေ ကရင်အိကျီ င်္ လေးနဲ့က နီမဟုတ်လား
kai says: သူတို့တွေ… ကလေးရရင်ပြောကြနော…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9265
ဦးကြောင်ကြီး says: လျဆရာလား.. ဟိုကောင် မှောင်ခြစ်နှာမခြစ် ဟာဂို…
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟေ.. အပေါ်က အတွဲချောချောလေးက ဘူဒူတွေဒုန်းအေ… :P
Ma Ma says: ဘကြီးအောင် မှတ်တမ်းတင်သည်။
မြစပဲရိုး says: Thanks Mg Aung! :-)))
I wish I were be there with you all.